19/05/13 - 26/05/13 (59)
လျှပ်စစ်မီးမှန်ရေး ဖယောင်းတိုင် လှုပ်ရှားမှုထဲ ပုသိမ်မြို့လည်းပါဝင်လာ
ပုသိမ်၊ မေလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မျိုးမင်းထွန်း (YPI) မြို့ကြီးအတော်များများတွင်
လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်မီးမှန်ရေး ဖယောင်းတိုင် လှုပ်ရှားမှုတွင်ို
ပုသိမ်မြို့လည်း ပါဝင်လာကာ ယနေ့ ည ၇ နာရီ တွင် ပုသိမ်မြို့ရှိ တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့မှ စတင်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်လိုက်ကြသည်။ ည ၇နာရီခန့်တွင် ပုသိမ်မြို့ ဖယောင်းတိုင် လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်သူ ကိုဇော်မိုး၊ ကိုကျော့မောင်၊ ကိုနိုင်ကြီး တို့နှင့်အတူစုစုပေါင်း လူ ၂၀ ၀န်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီး ဖယောင်းတိုင် စတင်ထွန်းညှိကာ မြေနုလမ်း၊ ကုန်သည်လမ်းမှ တဆင့် ရွှေမုဋ္ဌော ဘုရားသို့ လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသို့ရောက်ရှိသည့်အခါ လူပရိတ်သတ် ၂၀၀ ၀န်းကျင်ထိ ရှိလာသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ ရုံးအနီးရှိ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်သား တဦးက “ညနေ ၆ နာရီလောက်က တည်းက အဲ့ဒီရုံးရှေ့ကို ရဲကားတွေ ရောက်လာတယ်၊ နောက်တော့ လူတွေက ဟိုတစ်စုဒီတစ်စုနဲ့တွေ့ရတယ်၊ လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အ၀ ရချင်တာတော့ ပြည်သူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါ၊ကျွန်တော်လည်းပါဝင်ချင်ပေမယ့် ရဲတွေလည်းရှိတော့ မထွက်ရဲဘူး’ ဟုပြောသည်။ ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သည့် ကိုကျော့မောင်က ‘လျှပ်စစ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာခံစား နေရတာတွေကို သမ္မတကြီးသိအောင် ပုသိမ်က လူထုကိုယ်စားထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါ’ ဟု YPI သို့ပြောသည်။ ပုသိမ်မြို့ခံတချို့ကလည်း မီတာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခ ကျပ် ၁၀၀၀ ကောက်ခံနေခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပေးစေလိုကြောင်းနှင့် ယနေ့တနေ့လုံး မီးမလာပဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချိန်မှ သာမြို့လုံးကျွတ် လျှပ်စစ်မီးပေးခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှုးဦးစိန်အောင်က ‘ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ အခက်အခဲတွေကြားက ပြည်သူတွေ မီးရအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင် ပေးနေပါတယ်’ ဟုပြောသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် လိုက်ပါသူများမှာ မည်သည့်ပိုစတာမှမကိုင်ပဲ၊ အော်ဟစ်ဆူညံခြင်း လက်ခုပ်တီးခြင်းမျိုးများ မပြုလုပ်ပဲ ရွှေမုဋ္ဌော ဘုရားသို့သွားရောက်ကာ အင်္ဂါထောင့်၌ ဖယောင်းတိုင်မီး ပူဇော်ကြပြီး တောင်ဘက်မုခ်မှပင် ပြန်လည်ဆင်းသက် လူစုခွဲခဲ့ကြသည်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ်၊ ပြည်၊ ပေါင်းတည် အစရှိသည့် မြို့များ၌ လျှပ်စစ်မီးမှန်ရေး ဖယောင်းတိုင် လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရဘက်မှ ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားခြင်း ဆိုသည့် ပန်ကြားချက်တစောင်ကို မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခြင်း၊ ပြည်ပမှ မီးစက်ကြီးများ မှာယူထားကြောင်းနှင့် မိုင်းကွဲမှုကြောင့် ပြိုလဲသွားသည့် ရွှေလီ-မန်ဆန် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင်များကို ၀န်ထမ်း ရာကျော်ဖြင့် အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်လျှက်ရှိကြောင်း သတင်းများဖေါ်ပြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ။ Yangon Press International သစ်ထူးလွင်
5/25/2012 11:37:00 PM
သုံးဆယ်မြို့ မှာ လျပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်တိုင်ထွန်းပြီး ဆန္ဒပြသူတွေ ထိုးကြိတ်ခံရ
ပဲခူးတိုင်း သုံးဆယ်မြို့ မှာ လျပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်တိုင်ထွန်းပြီး ဆန်ဒဖေါ်ထုတ်တဲ့ လူငယ်တွေကို စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ထိုးကြိတ်ခဲ့ကြောင်း အထိုးခံရတဲ့လူငယ်တွေက ပြောပါတယ်။ လူငယ်ငါးဥိး ဟာ မေလ(၂၄) ရက်နေ့ည ရှစ်နာရီခွဲလောက်က မီးထွန်းထားတဲ့ဖယောင်းတိုင်တွေ ကိုင်ဆောင်ပြိး သုံးဆယ်တံတားပေါ်မှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၆) ယောက်က တားမြစ်ပြီး အရင်ထိုးကြိတ်ခဲ့တယ်လို့ ကာယကံရှင် ကိုအောင်မျိုးက ပြောပါတယ်၊ရဲအရာရှိ ဦးစိန်ထွေးနဲ့အတူ ပါလာ တဲ့ အရပ်ဝတ်တဦးကလည်း ၀င်ရောက်ထိုးကြိတ်ခဲ့တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ မြို့နယ်အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်မြင့်ကတော့ မီးရရှိရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာ အန်အယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီကိစ္စကို အမှုဖွင့်တိုင်ကြားမယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဗွီဘီ
5/25/2012 11:23:00 PM
မြောင်းတကာ သံမဏိစက်ရုံ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ
၂၅ မေ ၂၀၁၂။ အခုလ ၁၈ ရက်နေ့က စတင်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ မှော်ဘီ မြောင်းတကာသံမဏိစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ၆ ရက်မြောက် ဒီကနေ့မှာ စတင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။
ဒီနေ့မနက် ၉ နာရီကစပြီး သံမဏိစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေထဲက ၂၅ ယောက်ဟာ သူတို့တောင်းဆို တဲ့ အခြေခံလစာ ရပိုင်ခွင့်တွေကို မရမချင်း အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေဟာ အခုလိုဆန္ဒပြတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ရဲ့စက်ရုံတစ်ရုံတည်းရဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက်မဟုတ်ပဲ အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက အလုပ်သမားတွေအတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့ဆီကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား အလုပ်သမားရေးရာတာဝ်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကိုအောက်သူရောက်လာပြီး အလုပ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။
5/25/2012 10:52:00 PM
ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ၆၇
လူငယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ (GW)ခေါ် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အဖွဲ့ က တိုင်းရင်သားတွေ အချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဌိပက္ခရပ်ဆိုင်းပြီး စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ ‘ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ၆၇ ’ ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ဒီကနေ့ စတင်လိုက်တာပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင်ရဲ့ သိရိခန်းမမှာ ဒီကနေ့ ဖွင့်ပွဲ အခန်းအနားပြုလုပ်ပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်သွား မှာဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၇ နှစ်ပြည်မွေးနေ့ကို၇ည်ညွန်းပြီး လက်မှတ် ပေါင်း 676767 ခြောက်သိန်းခုသောင်းခြောက်ထောင်ခုနှစ်ရာခြောက်ဆယ်ခုနှစ်အထိ ရရှိအောင်စုဆောင်းမှာဖြစ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ လက်မှတ်တွေကို ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဒ်ါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၇ နှစ်ပြည်မွေးနေ့မှာ ပေးအပ်မှာဖြစ်သလို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်တွေဆီကို ပေးပို့သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ အခန်းအနားကို ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုလှမျုိးနောင် ၊ မမီးမီးတို့လည်း တတ်ရောက်ကြတယ်။NLD လွတ်တော်အမတ်ထဲကဆို ကိုဖြိုးဇေယျာသော် လည်းတတ်ရောက်ပါတယ်။ လူမှုရေးအသင်းတွေက ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်တို့ ကိုဆောင်ဦးလှိုင်တို့လည်း တတ်ရောက်ကြတယ်။ ကိုရဲလွင် တို့အဖွဲ့ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးသီးချင်းတွေနဲ့ ဧည့်ခံဖျော်ဖြေပေးသွားကြပြီး တတ်ရောက်လာတဲ့ ပရိတ်သတ်ကတော့ (၂၀၀)နှစ်ရာကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဓါတ်ပုံများကို မေမေ့သား လင်းဆက် မှာ ရိုက်ကူးပေးပို့ ထားတာပါ။ သစ်ထူးလွင်
5/25/2012 10:28:00 PM
အလုံမြို့နယ် အဖွဲ့ ချုပ် ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့မေလ ၂၅ ရက်နေ့ ညနေ၅ နာရီအချိန်ခန့်က အလုံမြို့နယ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲတွင်တတ်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။အဖွဲ့ချုပ်နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှမိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်ယခုလက်ရှိဖြစ်နေသောအလုပ်သမားပြသနာများကိုပြေလည်အောင်ကူညီဖြေရှင်းနေကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှလဲ လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင်ဆန္ဒပြမှုများမှာ လူငါးယောက်ထပ်ပိုစုလျှင် ဥပဒေအရတရားမ၀င်လျှင် မိမိအိမ်ရှေ့မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖေါ်ထုတ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။သတင်း-ဓါတ်ပုံ (ဒီလှိုင်း)
5/25/2012 10:03:00 PM
တရုတ် ဆေးဝါးစက်ရုံ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှ ဆေးဝါးများ အန္တရာယ်ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဆေးဝါးစက်ရုံများ၌ ထုတ်လုပ်သော ဆေးတောင့် များအနက် စက်ရုံ ၁၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းတွင် ထုတ်လုပ်သော ဆေးဝါးအတောင့် (Capsule) များမှာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိကြောင်း တရုတ် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါး ကြည့်ကြပ်ရေး အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို CNA သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။တရုတ် အစားအစာနှင့် ဆေးဝါး ကြည့်ကြပ်ရေး အဖွဲ့က ဆေးဝါး ၁၁၅၆၁ အတွဲများကို တစ်လကြာ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခရိုမီယမ် (chromium) ပါဝင်မှု မြင့်မားလျက် ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။အဆိုပါ အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဆေးဝါးစက်ရုံများတွင် စက်ရုံ ၂၅၄ ရုံမှ ထုတ်လုပ်သော ဆေးဝါးများမှာ စိတ်ချလုံခြုံမှု မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ခရိုမီယမ်ကို အများအပြား စားသုံးမိပါက ကင်ဆာရောဂါနှင့် အဆိပ်သင့်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
5/25/2012 09:58:00 PM
လျှပ်စစ်မီး၂၄နာရီ ရရှိရေး၎ရက်မြောက်နေ့ ရန်ကုန်တွင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရား ၀န်းကျင်၌ မေလ (၂၅)ရက်နေ့ည(၇)နာရီကျော်ခန့် အချိန်တွင် စတုတ္တနေ့ အဖြစ် လျှပ်စစ်မီး ၂၄နာရီ ရရှိရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွင် လူ(၁၀၀၀)ကျော် ပါဝင်ခဲ့ပြီး တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပါဝင်လာမှု ပိုမိုများပြားလာခဲ့ကြောင်း Popular Myanmar News Journal-Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး စတုတ္ထနေ့အဖြစ် ယနေ့ ၂၅.၅.၂၀၁၂ ညပိုင်းတွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသော ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူများက လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးများ နှုတ်ထွက်ပေး ရန် တောင်းဆိုကြွေးကြော်ခဲ့ ကြပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင် အား ပြင်းထန်စွာရှုတ်ရှ ခဲ့ကြသည်ဟု 7Day News Journal - Facebook သစ်ထူးလွင်
5/25/2012 09:39:00 PM
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အချိန်ပြည့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေတာတွေကို ထောက်ခံကြောင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး နေ့ချင်းညချင်း လျပ်စစ်မီး ရရှိဖို့ ဆိုတာ ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဒီကနေ့ ပြောဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ NLD ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ အဲဒီလို ပြောကြားခဲ့တာပါ။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဟာ အဓိက ကျတာကြောင့် အခုလို တိုက်တွန်းပြောဆိုရတာ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသွားပါတယ်။
5/25/2012 09:24:00 PM
NLDဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲမှာ ပြည်သူမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေးခွန်းသုံးခုမေး
ကျောက်တံတား NLD ရုံးဆိုင်းဘုတ်တင် ပြည်သူမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေးခွန်းသုံးခုမေး ယနေ့ မေလ(၂၅)ရက်နေ့ညနေ ၆နာရီ အချိန်တွင် ကျောက်တံတားမြို့ နယ်ရှိ
NLDမြို့ နယ်ရုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မြို့ နယ်နေ ပြည်သူတို့ က “ပြီးခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါတီကြီးတစ်ခုမှ ၄င်းတို့ အနိုင် ရရှိက လျှပ်စစ်မီး အချိန်ပြည့်ရရှိရေး ကူညီပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်းမှာ ၄င်းတို့ အနိုင်မရ၍ မီးပြတ်ခြင်း ဖြစ်ရသည်မှာ ဟုတ်မဟုတ် ၊ လမ်းဘေးဈေးသည်များအား မြို့တော်စည်ပင်ရဲများက အခွင့်အာဏာသုံး ဆက်ဆံမှုများပြုကာ တာဝန်ထက်ပို၍ နှိပ်ကွက်ခြင်းများ၊ ယင်းကို ဆင်းရဲသားပပျောက်ရေး လား၊ ဆင်းရဲသား ဖိနှိပ်ရေးလားနှင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အသီးသီးတွင် သိက္ခာရှိ ၀န်ကြီးများသည် ၄င်းတို့ တာဝန် ယူထားသော ဌာနတွင် ပြည်သူအတွက် ထိခိုက်နစ်နာသည့် အဖြစ်မျိုးပြုလုပ်မိခဲ့လျှင် အမှားကို ၀န်ချတောင်းပန်ပြီး တာဝန်မှ နုတ်ထွက်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းကဲ့သို့ဝန်ကြီးမျိုးရှိပါသလား” စသည်ဖြင့် မေးခွန်းသုံးခုမေးမြန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါမေးခွန်းများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြန်ဖြေရာ … ပါတီကြီးတစ်ခုမှ ၄င်းတို့ အနိုင်မရ၍ မီးပျက်ခြင်း မဟုတ်နိုင်ကြောင်း မီးမပေးနိုင်သည့် အကြောင်းကို သတင်းစာ၌ ရှင်းလင်းထားကြောင်း ၊ လမ်းဘေးဈေးသည်များ ကိစ္စကိုလည်း စည်ပင်အနေဖြင့် ဈေးသည်များနှင့် တိုင်ပင်လုပ်ဆောင်၇န် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ တတိယ မေးခွန်းဖြစ်သည့် ၀န်ကြီးများနှင့်ပတ်သက်သော မေးခွန်းအား လက်ရှိ ပြည်သူများ အသိပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲသည်။
ဓါတ်ပုံ -အောင်ကျော်လတ် (AF)၊ အောင်ဇော်မင်း ( AF )
5/25/2012 09:20:00 PM
လျှပ်စစ်မီး မရရှိတဲ့အတွက် လူထုဆန္ဒပြနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကိစ္စဟာ ချက်ချင်း လက်ငင်း ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုတယ်၊ လူထုအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတာကို ထောက်ခံပေမယ့် ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး အလုံမြို့နယ် NLD ပါတီရုံး ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး ကျမတို့ရဲ့ စနစ်က မမှန်ခဲ့လို့။ ဓါတ်မီးမှန်မှန် မရတာ ဖြစ်တယ်။ အခုမှ ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး မမှန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကို ပြန်ပြင်ဖို့ဆိုတာ က၊ နေ့ချင်းညချင်းတော့ မဖြစ် နိုင်ဘူးဆိုတာ၊ ကျမတို့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်အောင် ကျမတို့ လုပ်ရ မှာက ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ပဲ။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ လုပ်တာကို ကျမတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လည်း လုပ်ပါ။ ဒါကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသွားတာ ဖြစ် ပါတယ်။
ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေက ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် တရားဥပဒေကြောင်းအရ
ပြန်ပြီး တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင် ဖို့ ပြင် ဆင်နေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နဂိုမူလ စီစဉ်ထားတဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုလည်း ဆက်လုပ် သွားမယ်လို့ ဦးဆောင်စီစဉ်နေသူတဦးက ဗီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ သုံးဆယ်မြို့မှာ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေ က ဆန္ဒထုတ် ဖော်ပွဲတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်၊ ပြည်၊ မုံရွာ စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ အခြေအနေက ငြိမ်သက်နေပါ တယ်။
နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ယူ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေရှိခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ မှာတော့ မေလ ၂၄ ရက်နေ့ထိ ခေါ်ယူ မေးမြန်းတာတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်သလို လျှပ်စစ်မီးကိစ္စနဲ့ မဆိုင်တဲ့ သရုပ်ဖော် အနုပညာပြပွဲ လုပ်နေသူ နှစ်ဦးကိုပါ ရဲကခေါ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
By VOA (မြန်မာပိုင်း) သစ်ထူးလွင်
5/25/2012 09:11:00 PM
ပြည်မြို့ ရတနာမာန်အောင်ရပ်ကွက်ရှိ ပြည်မြို့အား ရေပေးဝေသည့် စခန်းနှင့် လျှပ်စစ် မီးအတွက် လိုအပ်သောနေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မောင်းနှင်းဖြန့်ဖြူးရန်
အတွက် အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနက ပေးပို့ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ မြို့ တွေမှာ
တွေက အကြမ်းဖက် ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်မြို. လမ်းမတော်လမ်း ဗဟိုမီးသတ်ရှေ့ မှာ ပြည်မြို. ၂၄နာရီ မီးရရှိရေးဆန္ဒပြ
လောလောဆယ် ရောက်လာတဲ့ မီးစက်များကတော့ ၅၀၀ ကေဗွီအေ (၂)လုံး။ ၃၀၀ ကေဗွီအေ (၆)လုံး၊ စုစုပေါင်း (၈)လုံးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မီးစက်တွေ ထပ်ရောက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။ အခုရောက်ရှိလာတဲ့ မီးစက်တွေက mobile တွေဖြစ်လို့ဓာတ်အား အရေးပေါ်
ဆေးရုံတွေ၊ အများပြည်သူကို ရေဖြန့် ဖြူးပေးဝေမယ့် နေရာတွေကို အဓိကထားပြီး ဓာတ်အားပေးစက်များ ချထားမယ်လိုသိ ရပါတယ်။ ဒါအပြင့် အရေးပေါ် ဓာတ်အားလိုအပ်မယ်နေရာများကို လိုက်လံ မောင်းနှင်ဓာတ်အား